Mpanamboatra kojakoja sy milina mpanampy | China Fitaovana sy mpamatsy fitaovana fanampiny
Ity tsipika fandefasana labiera marindrano ity dia ampiasaina amin'ny famenoana labiera amin'ny kapoaka, rinser, filler ary seamer dia singa misaraka. Izy io dia afaka mamita ny dingana rehetra toy ny fanasana, famenoana ary famehezana.
Steam Generators no loharanon-karena tomombana avo lenta avo lenta ho an'ny micro-breweries, labiera ary rafitra fanaovana labiera kely kokoa.
Rafitra fanotoana malt
Ny rafitra fanodinana malt dia misy milina sy fitaovana hafa ilaina hanomanana voan-katsaka alohan'ny hanombohana ny famokarana wort ao amin'ny labiera.
Ny "hopping maina", antsoina koa hoe "hopping-cold" ao amin'ny orinasa, dia fomba iray namoahana menaka manitra sarobidy avy amin'ny lupulin ao anaty hop ao anaty labiera. Ny hopping maina dia tanterahina aorian'ny fizotran'ny labiera amin'ny faritra mangatsiaka. Amin'io fotoana io dia vita ny labiera nefa mbola tsy matotra tanteraka.